हाम्रा सन्तानहरु एम्बुसको धरापमा कहिलेसम्म बाँच्‍ने ? - Nayabulanda.com
हाम्रा सन्तानहरु एम्बुसको धरापमा कहिलेसम्म बाँच्‍ने ?
कमला भट्टराई ६ आश्विन २०७५, शनिबार ०९:४७ 399 पटक हेरिएको
कमला भट्टराई, सुनपा-११ इलाम
विश्‍वले वैज्ञानिक युगको सुत्रपात गरिरहँदा हामी भने हाम्रै झाडिहरुमा फसिरहेछौं । हाम्रै बलिदानीहरुलाई गिज्याउँदै छौं । आखिर यो कहिलेसम्म ? हामीलाई लाग्छ मुलुकले धेरै कष्टहरु सामना गर्‍यो अब त्यस्ता कष्टहरुको सामना गर्नु नपरोस् । दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामी भने हाम्रै आन्तरिक तिक्तताका ज्वालाहरुमा जल्दै छौं । एकै देशका नागरिक हामी हामी बीचका बेमेलहरुले मुलुकलाई भयावह परिस्थितिमा पुर्‍याउने हो कि ? यस्तै प्रश्नहरु हाम्रो माथि नै गरुङ्गो बनाउने गरि आइरहन्छन् । हामी कहिले हाम्रा तिक्तताका असन्तुष्टिका मुङ्ग्राहरु निभाउन सक्छौं र नेपाल आमालाई शान्तिको आभाष गराउन सक्छौ ? देशभित्र कहिले प्रज्वलित हुन्छ आमजनताले भरोसा गरेका आशाहरुको उदय, मौलिक संस्कृती र समृद्धिको अभ्युदय आखिर कहिलेसम्म ?
कसले दिन्छ यी अनुत्तरित प्रश्नहरुले बोकेका नाजवाफ मौन उत्तरहरु भनेर हामी सिंहदरबार र बालुवाटारतिर फर्केर झोक्राउन विवश छौं । कोही दलित भनेर हेपिएका छन्, कोही महिला भएर पुरुषवादी समाजका हिंसात्मक आक्रमणहरुको सामना गरिरहेका छन्, कोही धनीको हेपाइमा कोही सामन्तीको खेदाइमा मसिना नानीहरु, कोही अपहरणमा मरिरहेका छन् त दिनप्रतिदिन महिलाहरु बलात्कारको शिकार बनिरहेछन् आखिर यो कहिलेसम्म ? हामी सबैले अनेकतामा एकताका हातेमालो नगरुन्जेल हाम्रा अपेक्षाहरु गायब हुन के बेर ? किन पड्काइन्छ बम ? किन गरिन्छ आक्रमण ? एकै देशका हामी नेपालीबीच किन भरिन्छन् बिद्रोहका धुँवाहरु ?
आज सहिद परिवारले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सहिद, घाइते, बेपत्तासम्म पुगेको छैन । ती शहिदका लालाबालाहरुले राम्रो भोटो फेर्न पाइरहेका छैनन् । तर मुलुकले राज्यव्यवस्थाका भोटाहरु धेरै फटाइसक्यो । सिंहदरबार र बालुवाटारमा फोटोहरु धेरै झुंड्याए तर जनताको जीवनस्तरलाई समृद्ध बनाउने जीवन बुटिहरु नझुन्ड्याइएका सत्यहरुले हामीलाई लखेटिरहेको छ । आखिर कहिलेसम्म ? हामीहरु प्रश्‍न कति मात्र गर्नु, सुन्नेले नसुनीदिँदा आवाज बिहीनहरुको आवाज बेवारिसे अवस्थामा कहिलेसम्म पछारिनुपर्दछ भनेर नेपाली राजनीतिलाई प्रश्‍न हामीले धेरै वर्षहरुदेखी सोधिरहयौं । यदि अझै पनि झुट र बहानामा हाम्रो राजनीतिले हामीलाई ढाँटिरहयो भने आत्मघाती बमहरु इराक र अफगानिस्तानमा झैं नेपाली भूमिमा पड्कियोस् भन्ने कामना म जस्ता महिलाहरुले कहिलेसम्म गर्ने ?